/Blog/garari/Mashandisiro Ekushandisa Trenbololone Recipe Kusanganisa Trenbolone Enanthate Powder
Posted on 05 / 21 / 2019 by 阿斯劳 akanyora garari.
Chii chinonzi Trenbolone Enanthate?
Trenbolone E (Trenbolone enanthate) ndeimwe yemasteroid ayo anogona kuverengerwa semasimba ekuwedzera anowedzera kune mhasuru. Kunyange hazvo pakutanga yaishandiswa musimba kukura mune mhuka, kudiwa kwaro pakati pevarimi vemuviri vakakura mumakore akawanda nekuda kwekubudirira kwayo musimba kukura.
Tren E (Trenbolone enanthate) ndiyo yakarebesa fomu yakasimbiswa yetrenbolone uye ine yakawedzera nguva yekumwa. Nekudaro, iyo mwero iyo inoburitswa kubva mumuviri inononoka futi. Iine hafu yeupenyu hwemazuva gumi nemaviri, zvinoita kuti ive nenguva yakaderedzwa. Iyo yakareba hafu-yehupenyu, zvisinei, inobatsira kune yakarebesa anabolic chiito.
sei shandisa trenbolone recipe kusanganisa trenbolone enanthate powder
Zvishandiso zvaunoda kugadzirira
100mg / mL Trenbolone Enanthate recipe ye100mL
5mL Yakagadzirwa mafuta
3mL uye 20mL / 60ml sirinji ine 18-21 geji tsono
-Step 1: Shandisa steroid trenbolone enanthate powder
-Step 2: Wedzerai trenbolone powder, BA, uye BB mu beaker
-Step 3: Pisa beaker mubhati remvura
-Step 4: Wedzera mafuta akabatanidzwa
-Step 5: Kuchenesa
-Step 6: Vapfekedze vane flip off caps
Danho 1: Simesa steroid trenbolone enanthate powder
Shandisa trenbolone enanthate mapepa kuti aite trenbolone enantahte mafuta, danho rokutanga raunotora nderekuyera Trenbolone Enanthate powder mune beaker yegirazi. Iva nechokwadi chokuti iwe unosvika pakutsanangura kwepfungwa panguva yekuyera kwekuita kuti usanyanya kuva neTren Enanthate.
Step 2: wedzera Trenbolone powder, BA, uye BB mu beaker
Uye wedzera Benzyl Benzoate (BB) uye Benzyl Alcohol (BA) uye fambisa. Iyo yakasvibirira Trenbolone inotanga kuparara muhupfu. Kana iwe uchida kuwedzera kukurumidza kweichi chiitiko, tarisa nhanho 3.
Step 3: Pisa bheaker mubhajiro remvura
Kupisa bheaker mumvura yekushambidza mvura kunowedzera kukurumidza kwekuita. Mvura haifaniri kunge ichipisa zvikuru, ngaive inodziya nokuti iyo yakanyanya kutonhora inogona kutungamirira kuhujidhi.
Step 4: Wedzera mafuta akabatanidzwa
Wedzera mafuta akadzikidzwa akaiswa mumusanganiswa uye uikanganise zvakakwana. Iva nechokwadi chokuti hakuna hormone swirls isati yasimuka kuenda kune firtration process. Iva nechokwadi chokuti pasi rebheaker rinongoratidza pachena Trenbolone Enanthate solution.
Step 5: mupise
Ita sarudzo mune imwe siringi kana duku (iyi ichadzokidzwa kakawanda). Gadzirai firimu uye nenyuchi kune siriniti uye injove muvhu rakaipa.
Shandisai siriti inopinza mukati mutsva nekushandisa imwe mhirizhonga pairi. Usashandisa zvakawanda zvekumanikidzwa nokuti izvi zvinogona kuparadzanisa siriniti firimu uye iwe ungaguma uri mumhepo.
Kana ukacherechedza kuti kusvibiswa kwacho kunonoka, unogona kushandura mafiritsi esirivha nguva dzose kana wapedza kutsausa 40ml
Step 6: Zvipukise neflip off caps
Kana wangoitwa nehutachiona, shandisa mhinduro yacho.
Muchidimbu, Trenbolone e homebrew process yakataurwa pamusoro apa, danho rokutanga raunotora nderekuyera Trenbolone Enanthate powder mukiki yekiki uye kuwedzera Benzyl Benzoate uye Benzyl Alcohol (Unogona kutenga trenbolone enanthate powder online kubva kune vamwe steroids powder supplier). Iyo yakasvibirira Trenbolone inotanga kuparara muhupfu, asi kana iwe uchida kukurumidza kushanda, iwe unogona kupisa bheaker mumvura yekugeza. Mvura haifaniri kunge yakatsva asi inongoti inonaya nokuti iyo yakanyanya kutonhora inogona kutungamirira kuhuni.
Wedzera mafuta akadzikidzwa akaiswa mumusanganiswa uye uikanganise zvakakwana. Iva nechokwadi chokuti hakuna hormone swirls isati yasimuka kuenda kune firtration process. Ita sarudzo mune imwe siringi kana duku (iyi ichadzokidzwa kakawanda). Gadzirai firimu uye nenyuchi kune siriniti uye injove muvhu rakaipa.
Kana ukacherechedza kuti kusvibiswa kwacho kunonoka, unogona kushandura mafiritsi esirivha nguva dzose kana wapedza kufuta 40ml. Kana iwe wapedza kuvhara mhinduro yacho.
Heano mashoma Trenbolone Enanthate mabhenefiti ayo anounza patafura kana iwe wafunga kuishandisa.
-Iyo inopa musikana kukurumidza kukura
-Shandisai nitrogen kuchengetedza
-Gadzirisa cortisol mumuviri.
-Aid in mafuta kurasikirwa
Inopa kukurumidza musisi kukura
Kushandisa Trenbolone Enanthate inzira yakanakisisa yekukubatsira kuona kuti iwe unokwanisa sei kana iwe wakanga uchishuva kuwana kukurumidza musimba kukura.
Trenbolone Enanthate hazvina mubvunzo kuti anobatsira zvikuru mukukurega iwe uchicheka paunenge uchichengetedza musimba wechipfuva musimba munguva yekucheka.
Kukurudzira nitrogen kuchengetedza
Kusiyana nemamwe maSteroid ane tsandanyama yakakura semhedzisiro yekuchengetwa kwemvura, iyoTrenbolone Enanthate kuwedzera uremu kuri semhedzisiro yekukura kweNitrogen, inotungamira mukukura kwemhasuru nekusingaperi.
Chengetedza cortisol mumuviri.
Trenbolone Enanthate rinotarisa chiyero che cortisol chinobudiswa kubva ipapo zvichiwedzera kuporeswa uye kuporesa kuwedzerwa pane simba ravo panguva yekurovedza muviri.
Rubatsiro mukurasikirwa kukuru
Panguva yekurovedza, vatambi vakawanda vanosarudza kushandisa izvi sechinhu chesimba panzvimbo yekudya simashi inogona kutungamirira kuhomwe kuwanikwa.
Kuva mune runyoro rwemasimba ane simba steroids, Trenbolone Enanthate inofanira kunge yatove imwe yeyaunofarira steroids. Kana iwe uri kuronga kutanga kuishandisa, izvo hazvifanirwe kunetseka iwe. Iwe unogona kana kusarudza kuibvisa kumba kana kutenga iyo Trenbolone Enanthate online.
Anabolic Steroids uye Kuzviita, Purofesa Frank, peji 1-47
Nzira yekuita testosterone enanthate homebrew mu 6 matanho DECA powder-Mazano Ekupedzisira Nzira Yokuita Nandrolone Decanoate (Durabolin)